Lama-huraan waa Heshiis Siyaasadeed iyo Doorasho Dadban. (Qormo) | Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis.
Waxaa laga filayey Madaxweyne Farmajo inuu gobollada kala xaalo xeerka doorashooyinka oo runtii meel aad u sahlan joogay. Qodobka la isku maandhaafsanaa wuxuu ahaa abuuritaanka degmo-siyaasadeed. Marka laga hadlayo sameynta-degmo-siyaasadeed, waxaa cilmi-baarista mowduucan ku saabsani sheegaysaa in ay ugu fiican tahay in ay degmo kast taallo shan illaa 10 kursi, ayna ku tartamaan xisbiyadu.
Waxaan rumeysanahay haddii niyad wanaag jiro xal ayaa laga gaari karay arrinkan. Sidoo kale, waxaa laga filayey madaxweynaha inuu kala sooco doodaha la xiriira dastuurka iyo arrimaha doorashooyinka.
Markii Xeerka Doorashooyinka loo soo gudbiyey, Baarlamaanku wuxuu u saaray guddi ka kooban 15 xildhibaan inay dib-u-eegis ku sameeyaan. Guddigaasi wax badan ayay ka baddeleen sharciga. Waxay diideen nidaamkii metelaadda isku-dheellitiran. Sidoo kale, waxay tireen qodobbadii ay madaxtooyadu ku darsatay xeerka.
Ugu danbeyntii, waxay go’aamiyeen in aan laga gudbi karin saami-qeybsiga beelaha xilligan. Guddigu waxay go’aamiyeen in la qaato nidaamka loo yaqaan horreeyaa guuleysta (First Past the Post) oo ku saleysan 275 degmo-beeleed. Kursi walba beelaha heysta ayaa ku tartamaya ayay qalinka ku duugeen. Xildhibaannada badidood way aqbaleen soo jeedinta guddiga, xitaa kuwii ku jiray Golaha Wasiirradda iyo kuwii taageeri jiray Villa Soomaaliya. Xeerkaas ayay labada aqal u codeeyeen.
Ka sokow qodobbada dastuurka ka hor imanaya, xildhibaannadu waxay sheegeen inay u diideen Xeerka ay Golaha Wasiirradu keeneen saddex sababood.
Kow:- waxay xaqiiqsadeen nidaamka metelaadda isku-dheelli-tiran ee xisbiyada ku dhisan inuusan la jaanqaadi karin nidaamka beelaha ee 4.5. ee ay Soomaalidu awoodda ku qeybsatay.
Laba:- waxay yaqiinsadeen in nidaamka metelaadda isku-dheelli-tiran uu madaxda xisbiyada siinayo awood farabadan oo ay go’aan uga gaaraan qofka xildhibaan noqonaya.
Nin ka mid ah xildhibaannada ayaa yiri, “Odeyga beesheyda waan aqaan si aan ula macaamilo, laakiin nin xisbi siyaasadeed madax u ah uma oggolaan karo inuu go’aan ka gaaro cidda beesheyda ama degmadayda meteleysa.”
Saddex:- xildhibaannadu waxay welwel ka muujiyeen in nidaamka metelaadda isku dheelli-tiran uu u xaglinayo magaalooyinka waaweyn, gaar ahaan Muqdisho. Waxay leeyihiin xildhibaannadu, Xamar ayaa soo saareysa xildhibaannada badidood oo gobolladii ayaa meesha ka baxaya. Tusaale, haddii ay saddex milyan ka codeeyaan dalka oo ay hal milyan ka timaad Muqdisho, 30% xidhibaannada waxaa soo saaraysa Xamar.
Marka la fiiriyo waqtiga ka harsan xilliga doorashada oo bilooyin ah iyo marka la tixgeliyo duruufaha siyaasadeed, amni iyo dhaqaale sharcigan lama hirgelin karo 2020 shan sababood dartood.
Kow:- xeerkani weli waa qabyo oo kama jawaabayo sida loo abbaarayo sameynta degmooyinka-siyaasadeed. Kursi kasta ma waxaa la dhigayaa deegaan ay beesha ku tartamaysaa deggen tahay? Sidee laga yeelayaa beelaha deggan meelo kala fog oo uu kursi ka dhexeeyo? Dadka codeynaya ma beesha kursiga loo xiray oo kaliya ayay ka imanayaan?
Labo:- xeerka kuma cadda sida loo abbaarayo metelaadda Soomaaliland, Muqdisho, gobollada ay Shabaab heystaan iyo qoondada haweenka.
Saddex:- hirgelinta Xeerkani waxay u baahan tahay nabad-gelyo la isku hallayn karo. Runtiina taasi hadda ma muuqato.
Afar:- Xeerkani wuxuu u baahan yahay dhaqaale badan.
Runtii, waa nasiib darro in mar kale ay dalka soo foodsaartay xaalad jahwareer siyaasadeed ah. Soomaalidu demoqraadiyadda waxa kaliya ee ay ka heysay waxay ahayd in afar sano oo kasta uu yimaad is-baddel siyaasadeed. Way wanaagsanaan lahayd in ay dadku goobaha doorashooyinka u dareeraan oo ay xushaan cidda hoggaaminaysa afarta sano ee soo socota. Ha yeeshee, ma muuqdo jawi ay dalka kaga dhici karto doorasho qof iyo cod ah oo xor iyo xalaal ah 2020. Haddaba maxaa xal ah?
Waxaa miiska saaran saddex khiyaar:
Kow, in waqti-kordhis loo sameeyo baarlamaanka oo ay dabadeed doortaan guddoonka iyo madaxda. Sida muuqata, xeerka uu Madaxweynuhu saxiixay, qodobka 53-aad, wuxuu daaqad u furayaa arrinkan. Xubnaha baarlamaanku aad bay u rabaan arrinkan. Dad badan waxay filayeen inuu madaxweynuhu diidi doono oo uu qodobkaas meesha ka saari doono. Miyuu ka ilduufay mise wuu u bareeray? Taas xogteeda ma hayo. Laakiin daaqaddaasi way u furan tahay baarlamaanka.
Associate Professor – Daraasaadka Amniga, Jaamacadda Qatar
Previous articleDadkii ugu badnaa oo Coronavirus ugu dhintay Talyaaniga & Cudurka oo gaaray 158 Dal (Warbixin)
Next articleDowladaha Somalia & Talyaaniga oo kala saxiixday heshiis ay fulinayaan Hay’adaha Q/Midoobay
Dacwad looga horjeedo Sharciga Doorashada oo loo gudbiyey Maxkamada Sare (Yaa ka danbeeya?)